Nanofana tany Behara sy Ambovombe Androy ny CNaPS - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
FLM. Hitombo isa ny mpiasa hisitraka ny zon’ny amin’ny fiahiana ara-tsosialy omen’ny CNaPS eo amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) ao amin’ny synodam-paritany Ambovombe Androy. Nohamafisina tamin’ny fanazavana ny dingana tsy maintsy arahina hahatonga ny mpampiasa hahalala ny adidiny sy hahatonga ny mpiasa hahafantatra ny zony. Araky ny lalàna dia ny CNaPS amin’ny maha iraky ny fanjakana azy no mitantana ny fiahiana ara-tsosialy. Ny fiofanana natao, tao Behara, dia fanatanterahana ny fifanaraham-piaraha-miasa FLM sy CNaPS nosoniavin’ny Tale Jeneralin’ny CNaPS Raoul Arizaka Rabekoto sy ny filohan’ ny FLM ny Pasitera Dr David Rakotonirina ny alatsinainy 9 okitobra 2017.
Niompana tamin’ny lalàna mifehy ny asa, ny fifanekena arakasa, ny fepetra arahina amin’ny asa, ny fitantanana ny maha-olona amin’ny toeram-piasana ny fiofanana. Ary nisongadina hatrany tao anatin’ny fampianarana nomena azy 138 mianadahy ny fomba fandoavana ny latsakemboka izay miantoka manontolo ny fisitrahana ny fiahiana ara-tsosialy. Nandefa solontena ireo fileovana 16 mandrafitra ny synodam-paritany Ambovombe Androy izay ahitana kristianina 91 400 araka ny statistika taona 2017 navoakan’ny synodam-paritany Ambovombe Androy ity. Tao amin’ny FLM ao Behara 11km avaratr’Amboasary Atsimo no nanatontosana ny fanofanana notarihin’i Rakotomila, Tale fitantanana eo anivon’ny CNaPS. Nilaza izy fa « fanambin’ny CNaPS ny ahazoan’ny mpiasa malagasy rehetra ny fiahiana ara-tsosialy ». « Tsy fivelomana kosa ny asa fanompoana ao amin’ny FLM fa tena karama izy io » hoy Randrianarijaona Charles Emilson, lehiben’ny SASS (Service d’Actions Sanitaire et Sociale) eo anivon’ny CNaPS tamin’ny fanofanana nentiny ka rariny ny hisitrahan’ny mpiasa sy ny ankohonany ny zony.
Nanatrika ny fiofanana ny filohan’ny synodam-paritany Ambovombe Androy ny pastora Elia Mampitohy sy ny tonia FLM foibe ny teolojianina Mananato Toromare. Fantatra fa hanana solontena ho any Etazonia amin’ny volana septambra 2018 ny synodam-paritany Ambovombe Androy izay haharitra tapa-bolana ho fanatsarana hatrany ny fampianarana fanabeazana eo anivon’ny FLM. « Anio tokoa mikarakara, ampitso mananjara » izay ilay fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra andraikitry ny rehetra.
Orinasa tsy miankina. Taorian’i Behara dia nihazo an’Ambovombe Androy ny ekipan’ny CNaPS notarihin’i Rakotomila Talen’ny Fitantanana eo anivon’ny CNaPS, ny alatsinainy 9 hatramin’ny alarobia 11 aprily lasa teo. Nanome fiofanana ireo mpampiasa sy mpiasa ao amin’ny Faritra Androy ahitana ny distrika Ambovombe, Tsihombe, Beloha ary Bekily. Niompana manontolo tamin’ny fomba fanatontosana ireo antotan-taratasy maha-mpikambana feno ao amin’ny CNaPS ny mba tsy hahavery zo ny mpiasa sy tsy hahafaty antoka ny Mpampiasa ny fanofanana. Nolazalazana amin’ny ankapobeny ny maha orin’asam-panjakana nirahina manokana hikarakara ny fiahiana ara-tsosialy ; tsy iza fa ireo fehezin’ny satan’ny asa no nanombohana ny fanofanana. Tao amin’ny lapan’ny paroasy Meday Mahagaga an-tampon-tananan’Ambovombe Androy no nampitan’ny teknisiana ny CNaPS ireo fepetra rehetra takiana hahatomombana ny fiahiana ara-tsosialy.
Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa ny talen’ny fampandrosoana ny Faritra Androy, Imbola Vonjy Maurice, izay nisolo tena ny lehiben’ny Faritra niaraka tamin’ny lefitry ny ben’ny tanàna Kaominina ambonivohitr’Ambovombe Androy Ramanajafy Auguste ; izay samy nankasitraka ny fidinana ifotony ataon’ny Tahirim-pirenena. Nandrisika azy 45 mianadahy (Mpampiasa, Mpiasa) tonga avy amin’ireo distrika efatra ireo ny manam-pahefana, ka nitaona azy rehetra hahazo fahombiazana. Nasongadin’ny solontena ny Tale jeneraly ny CNaPS i Rakotomila tale ny fitantanana fa « tafiditra amin’ny politikan’ny CNaPS ny manakaiky ny Mpampiasa sy Mpiasa amin’ny alalan’ny fanofanana toy izao ». Ny sampan-draharaha SASS eo anivon’ny CNaPS tantanan’ny inspecteur de travail Randrianarijaona Emilson no niantsoroka ny fampitana ireo tsara ho fantatra rehetra amin’ny fikirakirana ireo antontan-taratasy takian’ny CNaPS mba hisitrahan’ny mpiasa ny zo fototra ho azy dia tsy inona fa ny fiahiana ara-tsosialy. Ao ny fanampiana ny fianakaviana, ny loza sy ny aretina vokatry ny asa ary ny fisotron-dronono. Ny latsakemboka arotsak’ireo mpampiasa sy mpiasa no tsinjaraina ho fanampiana ara-tsosialy.
Teo am-pamaranana ny atrik’asa dia notolorana mari-pankasitrahana sy boky toro-làlana izy 45 mianadahy ary nampiarahana an’izany ny modelin’ireo antontan-taratasy ho fenoina tsy hampisy tomika ny fikarakarana na ny fandoavana latsakemboka na ny fahazoana ny fiahiana ara-tsosialy ahatanteraka tokoa ny fanamby manao hoe : « fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra, andraikitry ny rehetra ».
Forum des métiers : La CNaPS conseille les jeunes avant leur embauche - il y a 5 jours
FLM sy CNaPS : Nanofana synoda roa (SPAFI /SPATSIM) ny CNaPS - il y a 6 jours